नेमारको पिएसजीले जित्यो लिग वानको उपाधि, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
नेमारको पिएसजीले जित्यो लिग वानको उपाधि
एजेन्सी । फ्रान्सको लिग वान फुटबल उपाधि नेमार आवद्ध क्लव पेरिस सेन्ट जर्मेन पिएसजीले जितेको छ । आइतबार राति घरेलु मैदानमा भएको खेलमा पिएसजीले लिगमा दोस्रो स्थानको मोनाकोलाई ७–१ गोल गोल अन्तरले पराजित ग¥यो ।
खेलमा जित निकालेको पिएसजीले ३३ खेलबाट ८७ अंक बटुल्यो । मोनाको भने समान खेलबाट ७० अंकमै सिमित भएपछि पिएसजीले पाँच खेल अगावै लिग वानको टाइटल हातपार्न सफल भएको हो ।
अंक तालिकामा अब दुवैले समान पाँच–पाँच खेल खेल्नबाँकी छ । तर पिएसजीले सबै खेल हारेपनि उसैको अंक लिगमा शिर्ष स्थानमा पर्छ । सबै खेल जित्दापनि मोनाकोले जम्मा ८५ अंक जोड्ने छ । पिएसजीको अहिलेनै ८७ अंक छ ।
आइतबार राति पिएसजीको जितमा जियोभानी लो सेल्सो र डिमारियाले २–२ गोल गर्दा काभानी र जुलियन ड्राक्सलरले १–१ गोल गरे । मोनाकोकै राडामेल फाल्कावोले एक आत्मघाती गोल उपाहार दिए । मोनाकोका लागि रोनी लोप्सले एक सान्त्वना गोल फर्काएका थिए । नेमार भने खेलमा समावेश थिएनन् । उनी घाइते भएका कारण आराममा छन् ।
पिएसजीले ३३ खेल खेल्दा २८ मा जित, ३ मा बराबरी र २ मा हार व्यहोर्दै यस पटकको लिग वान उपाधि जितेको हो । पिएसजीले ३३ खेलमा १ सय ३ गोल गरेको छ ।